कोरोना संक्रमण : नेपालका अस्पतालहरुको स्तर सुधारको अवसर ! – Nepal Japan
कोरोना संक्रमण : नेपालका अस्पतालहरुको स्तर सुधारको अवसर !
नेपाल जापान ८ बैशाख ११:४६
विश्वभरि महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन । संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै जाँदा उपचारका लागि अस्पतालहरुको स्तरमा समेत सुधार भैरहेको छ ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र शहरमुखी भैरहेका बेला कोरोना संक्रमणपछि जिल्लाा र अञ्चल अस्पतालहरु समेत सुविधासम्पन्न बनेका छन् । यस्तैमा पर्दछ धवलागिरि अञ्चल अस्पताल । आधा दशकभन्दा अघिदेखिको यो अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आइसियू) सञ्चालन गर्ने सपना कोभिड–१९ को जोखिमका बेला साकार हुँदैछ ।
आवश्यकता खड्किए पनि अहिलेसम्म प्रबन्ध नगरिएको ‘भेन्टिलेटर’ यहीबेला अस्पताल एबन्थ्यो, भेन्टिलेटर आउँथ्यो ।
विसं २०७१/०७२ मै आइसियू चलाउन प्रयास अघि बढ्यो । बजेट पनि आयो । दक्ष जनशक्ति नहुँदा योजना बीचमै तुहियो । बजेट ‘फ्रिज’ भयो । त्यसयता पनि बजेट छुट्टियो, आइसियू बनेन । परिस्थितिवश यसपालि भने अस्पताल र सम्बन्धित निकाय बढी नै दबाबमा परे । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणले जटिल अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई आइसियूमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, श्वास प्र्रश्वासमा समस्या हुँदा भेन्टिलेटर आवश्यक पर्छ ।
बिडम्बना दुवै अत्यावश्यक उपकरण अस्पतालमा थिएनन्, सरकारले भने कोभिड–१९ को उपचार गर्ने अस्पतालका रूपमा तोकी नै सकेको थियो । त्यहीँमाथि कोरोना भाइरसको पाँचौँ र छैटौँ सङ्क्रमित जिल्लामै भेटिएका थिए । सङ्क्रमित अस्पताल भर्ना भएपछि सरोकार भएका पक्ष संवेदनशील बने । उपचारमा चाहिने उपकरण र सामग्रीको जोहोमा जुटे । जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजका अगुवा पनि ताते । पहल अघि बढाए । अस्पताल व्यवस्थापनले अगुवाइ गर्‍यो ।
“सबैको सहयोग र पहलबाट आइसियू कक्ष सञ्चालनमा आउँदैछ”, अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केवी रानामगरले भन्नुभयो, “वर्षौँदेखि प्रयास गरिए पनि बन्न सकेको थिएन, हामीले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर दुई सातामै बनायौँ ।”
उहाँले अहिले शुरु हुन लागेको तीन श्ययाको आइसियू कक्षमा थप दुई श्यया थपिने उल्लेख गर्नुभयो । आइसियू सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले रु एक करोड बजेट छुट्याएको थियो । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु ६० लाख बजेट दिएको छ ।
अध्यक्ष रानाले सङ्घ र प्रदेश सरकारले अस्पतालमा सुविधा थप र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घले दुईटा र प्रदेश सरकारले एउटा भेन्टिलेटर दिएको छ । “यस अस्पतालको सुधार र विकासका लागि उपयुक्त अवसर आएको छ”, अध्यक्ष रानाले भन्नुभयो, “अब अञ्चल नभएर उपप्रादेशिकस्तरको अस्पतालका रूपमा स्तरवृद्धि हुँदैछ ।”
उपप्रादेशिक अस्पतालका लागि चाहिने पूर्वाधार तयारीको काममा अस्पताल लागिपरेको उहाँको भनाइ छ । पहिलो चरणमा हाल रहेका ६५ श्ययालाई बढाएर १०० पुर्‍याइनेछ । भौतिक संरचना थपलगायतका योजना अघि सारिएको छ ।
अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक शैलेन्द्र विक पोखरेलले आइसियूका लागि चाहिने मुख्य उपकरण आइसकेको बताउनुभयो । “आइसियू कक्ष निर्माणको काम भइरहेको छ, थप केही उपकरण आउन बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “केही दिनभित्रमै आइसियू सञ्चालनमा आउँछ ।”
अस्पतालले सघन उपचार कक्षमा खटिने तीनजना नर्सलाई तालिमका लागि शनिबार पोखरा पठाएको छ । आइसियूमा एनेस्थोलोजिस्ट, फिजिसियन, अर्थोपेडिक, रेडियोलोजिस्टलगायत विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्ने अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालमा हाल केही विशेषज्ञ चिकित्सक रहे पनि आइसियूका लागि थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । पछिल्लो समय सघन उपचारलाई अलग्गै विधाका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसका लागि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको छुट्टै टोली चाहिन्छ ।
सांसद पाठकले अहिलेलाई कोभिड–१९ लाई केन्द्रित गरेर तत्कालीन सुुधारका काम भए पनि क्रमिक रूपमा सुविधा र जनशक्ति थपिनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अस्पतालले सिटी स्क्यान, एमआरआईलगायतका सेवा थपका लागि पहल अघि बढाइएको छ ।
अस्पतालमा अहिले कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित बागलुङ नगरपालिका–४ की १९ वर्षीया युवती उपचाररत हुनुहुन्छ । यसअघि सोही नगरपालिका–३ की ६५ वर्षीया सङ्क्रमित महिला उपचारपछि निको भएर घर फर्किसक्नुभएको छ ।